Fahazoan-dàlana ho an'ny mikraoba New Jersey - ho an'ireo mpandraharaha rongony kely any NJ
Fahazoan-dàlana momba ny rongony mikraoba New Jersey
Ny fahazoan-dàlana mikraoba rongony New Jersey dia mety mahaliana ho an'ireo mpandraharaha madinika ao amin'ny Fanjakana. Fitsipika momba ny fahazoan-dàlana rongony vaovao mikendry ny hitondra tombontsoa ho an'ny mponina ao aminy miaraka amin'ny fotoana manokana hidirany eny an-tsena raha tsy misy famatsiam-bola an-tapitrisany dolara ho toy ny microbusiness rongony.
Ny marina dia, tsy misy fameperana anatiny amin'ny fepetra takiana hahazoana fahazoan-dàlana rongony, New Jerseyans dia ny mifaninana mpandraharaha ivelan'ny fanjakana manana traikefa sy famatsiam-bola an-tapitrisany, izay mety hampiala azy ireo amin'ny indostria.
Ny fahazoan-dàlana momba ny rongony bitika NJ dia mety hanampy amin'ny sehatry ny saha, manome ny exclusivité an'ny New Jerseyans ho an'ny kinova kely amin'ny indostria ary manome toky ny fandraisan'anjaran'ireo tompona orinasa kely mipetraka amin'ny fanjakana amin'ny tsenan-rongony.
Raha liana te hanomboka manokatra dispensary any New Jersey na manomboka fandidiana mihamitombo ao amin'ny Garden State, eto no ilainao ho fantatra momba ny fahazoan-dàlana momba ny rongony bitika any New Jersey sy ny fomba fangatahana izany.
Momba ny fahazoan-dàlana New Jersey Cannabis Microbusiness
New Jersey Microbusiness fahazoan-dàlana dia nihena kinova ny iray amin'ireo misy lisansa rongony any NJ, fa ankoatry ny fepetra mahazatra, dia misy fiarovana fanampiny ho an'ny New Jerseyans, manome azy ireo tombony hiditra amin'ny indostrian'ny rongony. Ny kilasy efatra amin'ny fahazoan-dàlana rongony dia misokatra ho an'ny kinova famokarana, mpamboly, mpanodina na mpivarotra ambongadiny.
Ny fitsipiky ny rongony any New Jersey dia milaza fa ny mampiavaka ny fahazoan-dàlana microbusiness dia:
10% ny fahazoan-dàlana rongony hivoaka amin'ny orinasa bitika.
Ny tompona orinasa mikraoba dia tsy maintsy mponina ao New Jersey izay nonina tao New Jersey nandritra izay 2 taona lasa izay;
51% amin'ireo tompona orinasa bitika dia tsy maintsy mponina ao an-tanàna na tanàna mifanakaiky hiasan'ny orinasa madinika.
Tsy misy tompona, talen'ny, tompon'andraikitra na olona hafa manana tombony ara-bola izay manana fahefana hanapa-kevitra amin'ny orinasa rongony manana alalana, mpizara, na serivisy fanaterana, na orinasa bitika kely na tsia, afaka mitazona tombony ara-bola amin'ny orinasa madinika
10 isan-jaton'ny fahazoan-dàlan'ny rongony New Jersey dia orinasa bitika
"f. (1) Ny komisiona dia miantoka fa farafaharatsiny 10 isanjaton'ny totalin'ny fahazoan-dàlana navoaka ho an'ny kilasy tsirairay amin'ny fananganana rongony, na ho an'ireo mpaninjara rongony sy serivisy fanaterana rongony, dia voatendry ary omena an'ireo orinasa bitika kely ihany, ary farafaharatsiny 25 isan-jaton'ny fahazoan-dàlana tanteraka navoaka dia omena an'ireo orinasa bitika. ”
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HANOKAFANA DISPENSARY CANNABIS AO JERIA Vaovao
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HAHAZOANA LISENY BUSINESS CANNABIS AO JERSEY Vaovao
Karazana fahazoan-dàlana mikraoba mikraoba New Jersey
Kilasy 1 - Mpamboly rongony, ny microbusiness dia afaka mamboly rongony miaraka amin'ny velarana maniry tsy mihoatra ny 2,500 metatra toradroa; 24 metatra ny haavony - na zavamaniry 1,000.
Kilasy 2 - Processeur / mpanamboatra rongony, ny microbusiness dia afaka manodina rongony maina tsy mihoatra ny 1,000 pounds isam-bolana;
Kilasy 3 - Mpivarotra rongony, ny microbusiness dia afaka manangona rongony rongony maina tsy mihoatra ny 1,000 pounds (na vola mitovy amin'izany amin'ny endrika hafa) isam-bolana;
Kilasy 4 - Mpizara rongony - rehetra.
Kilasy 5 - Mpivarotra rongony, ny microbusiness dia afaka mahazo amidy antsinjarany tsy mihoatra ny 1,000 XNUMX pounds ny rongony maina na vola mitovy amin'izany amin'ny endrika hafa isam-bolana.
Kilasy 6 - Fanaterana - rehetra.
Voafaritra araka ny lalànan'ny rongony New Jersey ny "microbusiness":
Ny "microbusiness" dia olona na orinasa nahazo alalana avy amin'ny Vaomiera mifehy ny rongony ho rongony 1mpamboly [mpamboly]1, rongony 1mpanamboatra [processeur]1, mpivarotra rongony, mpaninjara rongony, mpivarotra rongony, na serivisy fanaterana rongony izay mety misy ihany, mikasika ny asany eo amin'ny sehatry ny asa, sy ny fahaizany ary ny habetsaky ny vokatra:
(1) mampiasa mpiasa tsy mihoatra ny 10;
(2) miasa toeram-panafody rongony mitazona faritra tsy mihoatra ny 2,500 metatra toradroa, ary raha misy rongony 1mpamboly [mpamboly]1, mamboly rongony amin'ny faritra tsy mihoatra ny 2,500 metatra toradroa refesina amin'ny fiaramanidina marindrano ary maniry eo ambonin'io fiaramanidina io tsy mihoatra ny 24 metatra;
(3) manana zava-maniry rongony tsy mihoatra ny 1,000 isam-bolana, afa-tsy ny fananan'ny mpizara rongony ny rongony ho an'ny fitaterana dia tsy iharan'io fetra io;
(4) mahazo sy manodina isam-bolana, raha misy rongony 1mpanamboatra [processeur]1, tsy mihoatra ny 1,000 pounds ny 1azo ampiasaina1 rongony 1[amin'ny endrika maina]1;
(5) mahazo amidy indray isam-bolana, raha mpivarotra rongony dia tsy mihoatra ny 1,00 pounds ny 1azo ampiasaina1 rongony 1[amin'ny endrika maina]1, na ny vola mitovy aminy 1[hafa]1 teny 1ny vokatra rongony vita amina na resin rongony1, na izay atambatra ao; SY
(6) mahazo amidy amin'ny varotra isam-bolana, raha ny mpivarotra rongony dia tsy mihoatra ny 1,000 pounds ny 1azo ampiasaina1 rongony 1[amin'ny endrika maina]1, na ny vola mitovy aminy 1[hafa]1 teny 1ny vokatra rongony vita amina na resin rongony1 , na izay mitambatra ao aminy. ”
Azonao atao ve ny mivarotra ny lisansy New Jersey Cannabis Microbusiness
Ny tompona fahazoan-dàlana rongony bitika any New Jersey dia tsy mahazo mivarotra na mamindra ny taratasiny. Izay toa fepetra iray noraisin'ny mpanao lalàna hanakanana ireo mpandraharaha rongony ivelan'ny fanjakana tsy hanandrana mitaona ny tsenan'orinasa bitika.
Ohatrinona ny vidin'ny fahazoan-dàlana amin'ny fahazoan-dàlana momba ny rongony mikraoba New Jersey
Ny sarany farany ambony amin'ny famoahana na fanavaozana ny fahazoan-dàlana voatondro ary navoaka tamin'ny orinasa bitika dia tsy mihoatra ny antsasaky ny sarany mihatra amin'ny fahazoan-dàlana mitovy kilasy navoaka ho an'ny olona na entity izay tsy orinasa bitika. Ny fahazoan-dàlana voatondro ary navoaka tamin'ny orinasa bitika dia manan-kery mandritra ny herintaona ary azo havaozina isan-taona.
Tags:Jersey vaovao momba ny rongony rongony, fahazoan-dàlana microbusiness manome jersey vaovao, microbusiness Jersey vaovao, fahazoan-dàlana momba ny microbusiness